Avianca Brasil nandefa ny làlambenan'ny mpandeha amerikana voalohany any Miami
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Avianca Brasil nandefa ny làlambenan'ny mpandeha amerikana voalohany any Miami
Avianca Brasil, iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra ao Brezila, dia manambara ny laharam-pahamehana amin'ny sidina mpandeha tsy an-kiato isan'andro eo anelanelan'ny São Paulo (GRU) sy Miami (MIA), manomboka ny zoma 23 jona 2017. Ity fanombohana fahavaratra andrasana fatratra ity dia manamarika ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka fampidirana voalohany ny zotra mpandeha mankany amin'ny toeran'i Etazonia ary ny faharoa any ivelan'i Amerika atsimo ihany. Avianca Brasil dia niasa serivisy mpitatitra entana tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami nanomboka ny taona 2015.
Ny sidina dia hotompoin'ny fiaramanidina Airbus A330-200, izay misy mpandeha 238 ary namboarina ho sokajy serivisy roa: seza 32 amin'ny orinasa ary 206 amin'ny Toekarena.
"Ao amin'ny Avianca Brasil, miaina tetezamita mahaliana sy tsingerin'ny fitomboana izahay ho lasa mpitatitra matanjaka kokoa, matotra kokoa ary mifaninana kokoa," hoy i Frederico Pedreira, filohan'ny Avianca Brasil, izay mpikambana ao amin'ny Star Alliance malaza. "Noho ny fisian'ireo Breziliana mitsidika sy monina any South Florida, dia nanapa-kevitra ny hanao fandefasana lavitra izahay amin'izao fotoana izao satria fantatray fa misy ny fotoana mety amin'ny orinasa ary misy ny serivisy manome tolotra avo lenta ho an'ireo mpandeha iraisampirenena."
Avianca Brasil dia mirehareha amin'ny sambo tanora indrindra any Amerika Latina ary miavaka amin'ny fanomezana serivisy ambony kokoa, efitrano fandraisam-bahiny betsaka, rafi-pialamboly tsirairay, sakafo maimaim-poana ary programa tsy fivadihana Amigo.
Ny mpanjifa kilasy orinasa dia omena traikefa mivoatra, anisan'izany ny menus premium sy ny kitapo amenity. Ny fametrahana seza 1-2-1 dia miantoka ny fiainana manokana sy fiononana bebe kokoa; seza nipetraka tamin'ny toerana fisaka tanteraka. Eo am-pelatanan'izy ireo, ireo mpizahatany premium dia mankafy rafi-pialamboly araky ny fangatahana, miaraka amin'ny sarimihetsika, andian-tsarimihetsika ary lalao isan-karazany, azo jerena amin'ny takelaka finday 15-inch. Ireo seza koa dia misy takelaka fanaraha-maso, jiro fanampiana, latabatra fanohanana, fifandraisana USB, fantsona herinaratra ary fitsaharana loha azo ovaina.
Ao amin'ny Toekarena, izay voalamina ao anaty fandaharana 2-4-2, ny mpandeha dia afaka manararaotra ireo rafi-pialam-boly tsirairay misy fitaovana fanaraha-maso 9-santimetatra, miampy fanaraha-maso lavitra, fantsona herinaratra, seranan-tsambo USB, ary sisa tavela amin'ny loha sy tongotra. Ny jet vaovao dia misy ihany koa ny haitao farany jiro LED ambiny izay natao hanomezana traikefa nahafinaritra amin'ny dia.
Ny sidina voalohany niaingan'ny Miami, Flight 8510, dia miala ao Sao Paulo (GRU) Zoma 23 Jona 2017 amin'ny 11:55 alina, miakatra ao amin'ny MIA amin'ny 7:25 maraina Sabotsy 24 Jona 2017. Ny sidina 8511 dia miala amin'ny MIA amin'ny 6: 55 hariva 24 jona, tonga tany Brezila tamin'ny 4:30 maraina Alahady 25 Jona (ora eo an-toerana). Amin'ny faramparan'ity fahavaratra ity dia mikasa ny hanangana làlan'ny mpandeha São Paulo - Santiago miaraka amin'ny fiaramanidina A330 vaovao ny orinasa.
Ny MIA dia miasa eo ho eo isan-kerinandro 71 sidina mpandeha tsy miato mankany amin'ny tanàna valo any Brezila, izay ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina amerikana. Avianca Brasil no ho fiaramanidina fahatelo an'ny seranam-piaramanidina manompo ao Brezila, tsena iraisam-pirenena MIA ambony indrindra amin'ny 2015 miaraka amin'ny mpandeha mihoatra ny 2.1 tapitrisa.
"Voninahitra izahay fa nisafidy ny hanitatra ny asany ao amin'ny MIA i Avianca Brasil, ary hanao ny lalana mpandeha voalohany any ivelan'i Amerika atsimo ihany koa i Miami," hoy ny talen'ny seranam-piaramanidina Miami-Dade Avilio Emilio T. Gonzalez. "Na dia manohy manohy ny zotram-pandrosoana any amin'ny faritra mbola tsy voatanisa manerantany aza izahay, dia miasa ihany koa amin'ny fanamafisana ny serivisy an'habakabaka any amin'ny faritra mafonja any Amerika Latina sy Karaiba."
Ny tapakila amin'ny sidina mivantana an'i Avianca Brasil avy any Miami mankany São Paulo dia hita ao amin'ny www.avianca.com.br, amin'ny alàlan'ny masoivohon'ny fizahan-tany na ireo solontenan'ny varotra (GSA) an'ny orinasa any Etazonia:
Momba an'i Avianca Brasil
Avianca Brasil dia zotram-piaramanidina voalahatra hatramin'ny 2002. Amin'izao fotoana izao, ny mpitatitra dia manompo toeran-tany 23 sy toeran-tany iraisam-pirenena miaraka amin'ny fiainganana 235 isan'andro, miasa fiaramanidina 49 Airbus - fiaramanidina tanora indrindra any Amerika Latina. Avianca Brasil no mpitatitra voalohany any Amerika atsimo mamela ny fidirana amin'ny Internet amin'ny fiaramanidina an-tsambo ary iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny asa amerikana latina an'ny A320neo maoderina. Anisan'ireo tombony ireo ny programa tsy fivadihana Amigo, izay misy mpanjifa 4 tapitrisa voasoratra anarana. Amin'ny maha mpikambana Breziliana azy ao amin'ny Star Alliance, tambajotram-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra, Avianca Brasil dia mampifandray ireo mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina maherin'ny 1,300 manerantany amin'ny alàlan'ireo 27 mpiara-miasa aminy iraisam-pirenena. Raha mila fampahalalana bebe kokoa, azafady fidirana: www.avianca.com.br, araho ny @AviancaBrasil ao amin'ny Twitter ary midira Avianca Brasil ao amin'ny Facebook.
Ho an'ny fanadihadiana amin'ny haino aman-jery, mifandraisa azafady:
Email: [email voaaro] / [email voaaro]
Ary ny mandresy dia Boeing! Ny mpanamboatra fiaramanidina amerikana dia mamoaka ny Airbus ao amin'ny Paris Airshow